विहेको एक दिन अघि किन लाष्टै तनाव हुन्छ युवतीलाई ?
२०७६ वैशाख २३ सोमवार
प्रत्येक युवतीले आफ्नो विवाहको विषयलाई मनमा अनेक कुरा खेलाउँछन् । त्यसैले विहेको मिति जति नजिकिदै जान्छ, त्यति नै युवतीहरुको मनमा अनेक जिज्ञासा, तनाव र कौतुहलता बढ्दै जान्छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ, युवतीहरु बिवाहभन्दा पहिला आफ्नो पार्टनर र हनिमुनको बारेमा मात्र सोच्छन् भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यस्तो केही पनि हुँदैन । आम पुरुषले सोचे जस्तो युवतीहरुको मनमा हुँदैन । उनीहरुमा विहे आउनु अघि हुने तनावहरु निकै फरक हुन्छन्, जुन पुरुषले सोचेको पनि हुँदैन । अझ विहेको एक दिन अगाडिको रात युवतीमा हुने तनावको त कुरै गरी साध्य छैन । आखि के तनाव हुन्छ त युवतीमा थाहा पाइ राखौ ।
चाँडै विहे त गरिएन ?
बिवाहभन्दा एकरात पहिला केटीहरु कतै आफूले बिवाहको लागि हतार त गरिन भनेर घोत्लिन्छन् । यो कुराले पनि उनीहरुमा निकै तनाव बढिरहेको हुन्छ । उनीहरुलाई बिवाहपछि जिम्मेवारी लिन सक्दिन की भने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ ।
श्रीमानको घरमा स्वीकार्लालन कि नस्वीकार्लान ?
कस्तो होला जीवन साथी
सेक्सलाई कसरी नाई भन्ने ?
विवाहको खर्च अर्को तनाव